I-Nubia Red Magic 3: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | I-Androidsis
I-Nubia Red Magic 3 yenziwe ngokusemthethweni
Kudala sisiva uninzi lwamarhe malunga neNubia Red Magic 3 iinyanga. Yifowuni entsha yokudlala yohlobo lwesiTshayina, yenye yeemodeli ezilindelweyo kweli candelo lentengiso. Kukho zonke iintlobo zamarhe malunga nayo, njenge umthamo wakho webhetri okanye yakhe amandla kukhuphiswano olwahlukeneyo. Okokugqibela, emva kwalo lonke eli xesha lamahemuhemu, ifowuni sele ihanjisiwe ngokusemthethweni.
Ke sele sinayo yonke idatha kule smartphone intsha. Ibrand ayizisanga iifowuni ezininzi kulo nyaka, nangona thina Bashiye iAlfa entsha. Ngoku, thina thaca isindululo sabo esitsha kwicandelo lokudlala. Le Nubia Red Magic 3 yifowuni ebizwa ngokuba yinkosi.
Uyilo lwefowuni, uphawu lwesiTshayina luyamangalisa ngokubheja okuthile, kodwa oko kusebenza kakuhle kweli candelo. Uyilo olufanelekileyo kakhulu lokudlala. Yintoni egqithisile, kule fowuni sifumana fan ngaphakathi. Ndiyabulela kuyo, ubushushu besikhangeli buyachithwa. Iba yifowuni yokuqala kwintengiso yokusebenzisa le nkqubo.
1 Ukucaciswa kweNubia Red Magic 3
Ukucaciswa kweNubia Red Magic 3
Kwinqanaba lobuchwephesha, sele sibonile ezinye zeenkcukacha zeNubia Red Magic 3 kwiiveki ezidlulileyo. I-smartphone enamandla, eboniswa njengenye indlela elungileyo kwicandelo lokudlala. Lo nto Ungakhuphisana neBlack Shark 2 ekwanikezelwa nayo kutshanje. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Bonisa: 6,65-intshi ye-AMOLED ngesisombululo se-pixels ezingama-2.340 x 1.080
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 855
I-RAM: 6/8/12 GB
Ukugcina: 64/128/256 GB
Ikhamera yangaphambili: 16 MP
Ikhamera esemva: 48 MP
Ibhetri: 5.000 mAh
Ukunxibelelana: I-GPS, i-WiFi 802.11 a / c, iBluetooth, i-USB-C, i-headphone jack,
Abanye: Inzwa yeminwe yeminwe, fan ngaphakathi
Inkqubo yokusebenza: IPie yePie
Inkqubo yokupholisa yenye yamandla ale Nubia Red Magic 3. Uphawu lubanga ukuba banombulelo kuyo gcina ifowuni i-5 degrees ipholile kunezinye iifowuni ezikhuphisanayo. Umba obaluleke ngokungathandabuzekiyo xa udlala nesixhobo, ukuze ube namava omsebenzisi ngamaxesha onke.
Ngokungafaniyo nezinye iifowuni kwisiphelo esiphakamileyo, uphawu lwesiTshayina lunalo ukubheja ekusebenziseni ikhamera enye ngasemva kwisixhobo. Sifumana i-sensor ye-MP ye-48. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuzibophelela kwisenzi esinamandla, kodwa kwifowuni apho ikhamera ingeyona nto iphambili kuyo. Amandla kunye nokukwazi ukudlala iiyure zezona zinto zibaluleke kakhulu kule meko. Ukongeza, sifumana ibhetri yesikhundla ye-5.000 mAh kwifowuni. Ngokudibeneyo kunye neprosesa ye-Snapdragon 855 kunye nobukho be-Android Pie, sinokuzimela okuhle okuqinisekileyo.
Njengesiqhelo kwezi meko, ifowuni ityhilwe ngokusemthethweni e-China. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho zinkcukacha zinikiweyo malunga nokusungulwa kwayo kwamazwe aphesheya. Nangona ngokuqinisekileyo kungekudala kuya kubakho idatha entsha malunga noku. Kuba yonke into ibonisa ukuba sinokuyilindela le Nubia Red Magic 3 eYurophu.
Njengoko sibonile kwinkcazo yakhe, ifowuni iza kwiinguqulelo ezahlukeneyo ngokwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Ukuze umsebenzisi ngamnye abe nakho ukukhetha uguqulelo lwale Nubia Red Magic 3 olungele ngokufanelekileyo oko bakukhangela kwimeko yabo. Sele sinawo amaxabiso okutshintsha kuhlobo ngalunye lwefowuni. La ngamaxabiso abo:
Inguqulelo ene-6/64 GB iya kuba nexabiso elimalunga nama-euro angama-385 ukutshintsha
Imodeli ene-6/128 GB iya kubiza malunga nee-euro ezingama-426 ukutshintsha
Inguqulelo ene / 128 GB iza nexabiso elimalunga ne-465 euro ukuyitshintsha
Imodeli ene-12/256 GB iya kubiza malunga nee-euro ezingama-573 ukutshintsha
Siyathemba ukuva ngakumbi malunga nokumiliselwa kwayo kwilizwe liphela kungekudala.. Kananjalo nokuba zonke iinguqulelo zefowuni ziya kusungulwa kwimakethi yaseYurophu okanye hayi. Ngale ndlela akukho datha okwangoku. Ucinga ntoni ngale Nubia Red Magic 3?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Nubia Red Magic 3 yenziwe ngokusemthethweni
Olona hlelo lokusebenza lubalaseleyo lokulandela iziphumo zonyulo jikelele luka-2019 kwi-Smartphone yakho
INintendo ikhula yonke imihla ngakumbi kumaqonga eselfowuni. Ikamva lenkampani?